आमा पहिला गईन बाबाले कु,टेरा घर बाट निकाली दिए ४ दिन देखी भोकै बस्ने बास खोज्दै - ABNews Nepal
Dec 5, 2021 abnewsnepal, abnewsnepal.com, ajako khabar, ajako khabar nepal, Bhupendra Karal, latest ramailo samachar, taja khabar, taja khabar nepal, tajakhabar
बाग्लुङ बलेबा घर बताउने दुई साना बालकहरुको दुख देखेर पक्कै पनि तपाइको मन छुनेछ । उनिहरुको अहिले बि”चल्ली भएको छ, बाटोमा अ”लपत्र भेटिएका यी दुई बालकहरुलाइ एक महिलाले श”रण दिइरहेकी रहिछिन तर के गर्नु उनको पनि आर्थिक अबस्था एकदमै क”मजोर रहेछ, आफ्नै छोराछोरी पाल्न पनि मु”श्किल भैरहेको छ उनलाइ । धन हुनेसग मन हुन्छ तर मन हुनेसग धन हुँदैन, यहि त छ यहाको स”मस्या ।
आमा अर्कैसग पो”इला गएको र बाबाले पनि छो”डेर गएको बताउछिन उनि । क”ठै ब”रा कस्ता नि”र्दयी बाआमा, कसरी छो”ड्न सकेका होलान यति साना बालकहरुलाइ अ”लपत्र ? उनिहरुलाइ यी महिलाकी छोरिले सडकमा अ”लपत्र भेटेपछि घर लगेकी रहिछिन र अहिले भने उनले आफुसग ल्याएको बताउछिन उनी ।
जाडोको मौसम शरीरमा एकफाटो राम्रो लुगा पनि लगाउन पाएका छैनन यी बालकहरुले । फा”टेको अनि मै”लो लुगा, रु”न्चे अनुहार आखिर कुन नि”र्दयीका बच्चाहरु होलान यी ? मानवता अझै म”रेको छैन भन्ने कुराको उदाहरण बनेकीछिन यी आमा यी बे”घर बच्चाहरुलाइ श”रण दिएर । क”ठै कति अ”भागी यी अ”बोध बालकहरु, आमाबाबू नै उस्तैउस्ता ।
क”ठै ती बालकले आफ्नी आमाले पहिला एउटासग गएको र फेरि त्यो म”रेपछि अर्कोसग पो”इला गएको बताउछ्न । आफ्नो यस्तो अबस्था बनाएर छोडेर जाने आमालाइ यसो भने ती बालकले ” राम्रैसित हासिखुशिका साथ बस्नु, राम्रै खानु ।” क”ठै ममि लिन आएदेखि जान्छु भन्छ्न ती बालकहरु, साना बालक त ममिलाइ सपनामा देखेको वताउदा रहेछ्न ।
क”ठै था”म्न सकेनन ती बालकहरुले मन, डा”को छा”डेर रु”ए । चार दिनसम्म भो”कै बस्नुपरेको बताउछ्न उनी । उनका बाबु भने फ”टाहा रहेको अरुको सामान चो”र्दै भा”ग्नेगरेको बताउछ्न उनी । पढ्ने खुब रहर भएको बताउछ्न ती बालकहरु तर कसले बुझिदिने उनिहरुको म”र्म । अरुको आमा देख्दा निकै मन दु”ख्ने र भाइलाइ पाल्न निकै मु”श्किल परेको बताउछ्न उनी ।थप जानकारीको लागि भिडियो हेर्नुस https://youtu.be/Nkzd9n4Hsqk